Pakisha nje isuti yakho yokuhlamba kunye netawuli kwaye uye eFripp. Siza kubonelela ngayo nantoni na onokuthi uyiphathe ekhaya. I-Osprey Point ikwindawo entle kakhulu kwisiphelo esisemantla seFripp Island. Bukela ukuphuma kwelanga kwiveranda engaphambili njengoko amahlengesi edada elwandle kunye nookhwalimanzi bezingela isidlo sakusasa. Emva kosuku kwiikhilomitha ezi-4 ukuba kunxweme lwabucala, yiza ubukele ukutshona kwelanga kwiveranda evaliweyo. Ngumnqweno wethu ukuba usapho lwakho lwenze iinkumbulo eziya kuhlala kwizizukulwana ngezizukulwana.
Pakisha nje isuti yakho yokuhlamba kunye netawuli kwaye uye eFripp. Siza kubonelela ngayo nantoni na onokuthi uyiphathe ekhaya. I-Osprey Point ikwindawo entle kakhulu kwisiphelo esisemantla seFripp Island. Bukela ukuphuma kwelanga kwiveranda engaphambili njengoko amahlengesi edada elwandle kunye nookhwalimanzi bezingela isidlo sakusasa. Emva kosuku kumgama oziikhilomitha ezi-4 kunxweme lwabucala, yiza ubukele ukutshona kwelanga kwiveranda evaliweyo. Ngumnqweno wethu ukuba usapho lwakho lwenze iinkumbulo eziya kuhlala kwizizukulwana ngezizukulwana.
I-Osprey Point yindlu yokulala emi-4 (inkosi eyi-2, ikumkanikazi emi-2), igumbi lokuhlambela eli-3 elunxwemeni elihlala kumda wamanzi weFripp Inlet.
ISiqithi saseFripp sisiqithi sabucala seholide esizingca ngeemayile ezi-4 zamanxweme abucala acocekileyo, amachibi amaninzi, amabala okudlala, imisebenzi yabantwana, iikhosi zegalufa ezi-2 kunye neenkundla zentenetya.
Ungandifumana ngayo nayiphi na imibuzo kwi-843-986-7222.
Oku renti kukwafumaneka kwi "Snow Birds" kunye nerenti yenyanga ngesaphulelo. Nceda uqhagamshelane nam ukuxoxa ngesaphulelo.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R8040